Baaqa Taageero Ee Mas’uuliyiintii Hore Ee Deegaanka Soo Martay - Cakaara News
Baaqa Taageero Ee Mas’uuliyiintii Hore Ee Deegaanka Soo Martay
Jigjiga( Cakaaranews) Arbaco, 24ka February 2016. Baaqa taageero ee mas’uuliyiintii hore ee deegaanka soo martay oo uu madasha kasoo jeediyay mudane maxamed macalin cali(khadar)wuxuu u dhignaa sidan: marka hore waxaan si buuxda utaageraynaa baaqii kasoo baxay kulanwaynaha wadatashiga.
Xili shacabka deegaanku mugdi iyo rajo darro badan ay haysay dad badana ay aaminsanaayeen in xaalada dhibaato ee deegaanka kajirta aan laxalin karin waxna laga qaban karaynin ayaa maamulkani soo baxay.
Waxaan qiraynaa in xukuumada xiligan iyadoo isticmaalaysa tabo cilmiyaysan, xeelado cusub iyo kago’naansho ay suurta galisay horumar balaashan. Taas oo sugtay nabadgelyo taam ah, maamul suuban ayna adkaysay xidhiidhkii dadwaynaha dalka gudihiisa iyo dibadaba.
1. Hadaan eegno dhanka nabadgelyada waxaa ladhisay ciidan gaar ah oo deegaanku leeyahay-liyuu police. Waxaana si qoto-dheer loo darsay xaalada nabadiidka lana dajiyay qorshe cilmiyeysan oo faahfaahsan shacabkana laga qaybgeliyay taas oo mudo gaaban lagu soo afjaray dhaqdhaqaaqii nabadiidka. Waxaana maanta kajirta deegaanka nabadgelyo buuxda. Marka, waxaan halkan uga mahad naqaynaa ciidankeena federaalka iyo xoogaga kalagedisan ee heer federal ee gacanta kagaystay.
2. Dhanka horumarka: waxay xukuumada u suuragashay in tubtii horumarka si buuxda loogu jeestay. Anagoon baaqan kusoo koobi karin baaqan waxaa deegaanka oo idil kasocda horumar balaadhan oo dhinac kasta ah. Waxaa xusid mudan horumarka dhinaca biyaha sida: dhismaha biyo-xidheeno laga samaynayo dooxooyinka waa wayn , biyo-qabatino loogu talagalay cabitaanka, beeraha iyo xoolahaba oo deegaanka oo idil kasiman. Waxaa ladhisay boqolaal ceel iyo kumaankum barbaraago ah. Waxaa kaloo guulo waa wayn laga soo hoyay dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, beeraha kaabayaasha dhaqaalaha, ladagaalanka faqriga IWM.
3. Dhinaca maamulka suuban iyo xidhiidhka dadwaynaha: waxay dawladu soo dajisay nidaam cusub oo dib u curasho. Taas oo adkaysay midnamadii qawmiga ee shacabka soomaalida itoobiya iyo dareenkii itoobiyaanimaba. Waxay taasi meesha kasaartay isjiijiidadkii, qabyaaladii, shakigii, iskudhacyadii iyo dulsaarnimadii. Dhinaca xidhiidhka dawaynahana waxay xukuumadani daahfurtay albaab xukuumadihii ee deegaanka soo mara oo dhan kaxidhnaa iyadoo bulshada dibadaha kunool si joogta loogu tagayo dhamaan qaaradaha aduunka warbixino xog ogaalnimana lasiinayay. Waxaana lasameeyay ESTV oo qaaradaha dunida oo dhan laga wada daawado fursad qaali ahna u abuurtay in bulshada banaanka iyo guduhuba ogaadaan horumarka iyo nabadgelyada dhabta ah ee deegaanka kajirta. Safaradaasi waxay dhufayska kasaareen nabadiidkii kalagedisnaa sida Ubbo, itaxaad, alqushaash IWM. Taas oo keentay in qurbajoogtu kusoo qul-qulaan kana mid noqdaan xoogaga horumarineed ee deegaankooda maalgashanaya
4. Waxay muujinayaan dhamaan dadaaladaas aan kor kusoo xusnay in DDSI ay hormuud katahay dadaallka balaadhan ee uu dalkeenu ugu jiro inuu kaga mid noqdo dawladaha dhaqaalahoodu dhex-dhexaadka yahay.
5. Waxaan xisbiga EPRDF iyo dawlada federaalka ahba uga mahadcelinaynaa sida hagar la’aanta ah ee ay mar walba u garab taagan yihiin XDSHSI iyo xukuumada DDSI. Waxaana kascodsanaynaa inay sii laba jibaaraan taageeradooda.
6. Anagoo ah mas’uuliyiintii hore waxaan si buuxda u taageeraynaa dhaq-dhaqaaqa rajo soo celinta ah ee DDSI ay wado. Waxaana balanqaadaynaa maskax, muruq iyo maalba inaan lagarab istaagayno. Waxaana shaacabwaynaha deegaanka ugu baaqaynaa inay ilaashadaan guulahaas kor aan kusoo xusnay ayna xoojiyaan kaqaybgalkooda.